Yesu​—Ɔhene a Ɔnyɛɛ Bɔne Biara Huu Amane Wɔ Dua So | Yesu Asetena
WƆBƆƆ YESU ASƐNDUA MU
NSƐM A WƆKYERƐW BƆƆ YESU ATIFI NO MAA NKURƆFO DII NE HO FƐW
YESU HYƐƐ OBI BƆ SƐ ƆBƐNYA ASASE SO PARADISE ATENA
Wɔde Yesu kɔɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Golgota, anaa Tikoraa. Wofiri kuro no mu rekɔ hɔ a ɛnware; ɛhɔ na na wɔrekɔkum Yesu ne abɔnefo mmienu bi. Sɛ obi gyina “akyirikyiri” koraa a, ɔtumi hu nea ɛrekɔ so wɔ hɔ.​—Marko 15:40.
Wɔduu hɔ no, wɔyii mmarima mmiɛnsa no ntade, na wɔmaa wɔn bobesa a wɔahyɛ no kurobo. Ɛbɛyɛ sɛ Yerusalem mmaa na wɔfraa saa nsa no. Ebia na Romafo no pene so ma wɔde ma nnipa a wɔrekɔkum wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrente yaw pii. Yesu deɛ, bere a ɔde bi kaa n’ano no, wannom. Adɛn ntia? Saa sɔhwɛ kɛse a ɛda n’anim no, na ɔmpɛ sɛ ɔde biribiara bɛkatakata n’ani. Ná ɔpɛ sɛ ɔde anikan gyina mu kɔsi wuo mu.
Asraafo no twee Yesu mu de no too dua no so. (Marko 15:25) Afei wɔde nnadewa bobɔɔ ne nsa ne ne nan mu fam dua no ho, na ɛyaw a ɔfaa mu deɛ, yɛnka. Bere a wɔrema dua no so asi hɔ no, esiane sɛ na nnadewa no ara na ɛkura ne nipadua nti, na ɛretete fa mu, enti afei deɛ na ɔrehu amane paa. Nanso Yesu ankasa antia asraafo no. Mmom ɔbɔɔ mpae sɛ: “Agya fa firi wɔn ɛfiri sɛ wɔnnim deɛ wɔreyɛ.”​—Luka 23:34.
Sɛ Romafo no bu ɔbɔnefo bi fɔ kum no a, na wɔtaa kyerɛw ne bɔne fam dua no ho. Nanso Yesu deɛ, ne ho asɛm a Pilato kyerɛwee ara ne sɛ: “Yesu Nasareni, Yudafoɔ Hene no.” Ɔkyerɛw no Hebri, Latin, ne Hela kasa mu, enti na nnipa dodow no ara tumi kan. Nea Pilato yɛe no ma yɛhu sɛ na ɛyɛ no ahi sɛ Yudafo no agyegye no ara ama wabu Yesu kumfɔ. Asɛm a ɔkyerɛwee no, asɔfo mpanimfoɔ no ampɛ, enti wɔkaa sɛ: “Ntwerɛ sɛ ‘Yudafoɔ Hene,’ na mmom twerɛ sɛ ɔno na ɔkaa sɛ, ‘Mene Yudafoɔ Hene.’” Nanso afei deɛ na wɔn ateetee no amee Pilato, enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Deɛ matwerɛ no, matwerɛ.”​—Yohane 19:19-22.
Ná ɛyɛ asɔfo no abufuo paa, enti wɔkasakasae. Yɛbɛkae a, bere a Sanhedrin no redi Yesu asɛm no, nkurɔfo bɛdii ne ho adansekurum, na saa bere yi a wɔabɔ no asɛndua mu nso, asɔfo no kɔfaa saa atosɛm no bae bio. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ nkurɔfo a wɔretwam dii fɛw kekaa nsɛm bi te sɛ: “O! Wo a anka wobɛdwiri asɔrefie aguo na woasi no nnansa ntam, firi asɛndua no so si fam na gye wo ho.” Asɔfo mpanimfoɔ no ne akyerɛwfo no nso keka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Ma Kristo, Israel Hene no nsi mfiri asɛndua no so na yɛnhunu na yɛnnye nni.” (Marko 15:29-32) Abɔnefo mmienu a wɔsɛn Yesu nkyɛn no mpo bɔɔ no ahohora, nanso nnipa mmiɛnsa a wɔsɛn dua so no, Yesu nko ara na na ɔnyɛɛ bɔne biara.
Roma asraafo nnan no nso dii Yesu ho agorɔ. Ɛbɛyɛ sɛ na wɔrenom nsa nyinyanyinya, enti wɔdii ne ho agorɔ sɛ ɔno nso nnye bi nnom wɔ bere a wɔn ani tua sɛ Yesu mmɛn wɔn. Romafo no de nea wɔakyerɛw abɔ Yesu atifi no dii ne ho agorɔ sɛ: “Sɛ wone Yudafoɔ hene no a, gye wo ho.” (Luka 23:36, 37) Hwɛ asɛm! Wɔannya obiara antan n’ani anni ne ho agorɔ sɛ ɛkwan no, nokorɛ no ne nkwa no. Nanso wei nyinaa mu no, Yudafo a wɔrehwɛ nea ɛrekɔ so no oo, Roma asraafo a wɔredi ne ho agorɔ no oo, abɔnefo mmienu a wɔka ne ho no oo, Yesu ankasa antia wɔn mu biara.
Asraafo nnan no faa Yesu atade nguguso kyɛɛ mu nnan, na wɔbɔɔ so ntonto huu nea ɛbɛkɔ obiara hɔ. Yesu atade nhyɛase no deɛ, na ɛnni “mpameeɛ, na na wɔanwene firi soro abɛsi fam”; na ɛyɛ atade papa. Enti asraafo no keka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Mommma yɛnnsunsuane mu, mmom momma yɛmmɔ so ntonto nhwɛ deɛ ɛbɛyɛ ne dea.” Ɛno maa nkɔmhyɛ baa mu sɛ: “Wɔkyekyɛɛ me ngugusoɔ mu faeɛ, na m’atadeɛ nso, wɔbɔɔ so ntonto.”​—Yohane 19:23, 24; Dwom 22:18.
Ɛyɛɛ kakra no, abɔnefo no baako bɛhuu sɛ Yesu bɛyɛ ɔhene ampa. Ɔkaa ɔbɔnefo baako no anim sɛ: “Enti wonsuro Nyankopɔn koraa berɛ a seesei wowɔ atemmuo korɔ no ara mu yi? Yɛn deɛ, ɛfata yɛn, ɛfiri sɛ deɛ yɛyɛeɛ so akatua na yɛn nsa aka yi; na oyi deɛ, ɔnyɛɛ biribiara a ɛmfa kwan mu.” Afei ɔsrɛɛ Yesu sɛ: “Woba w’ahennie mu a, kae me.”​—Luka 23:40-42.
Yesu yii ano sɛ: “Nokorɛm mese wo nnɛ sɛ, wobɛka me ho wɔ Paradise.” Wanka sɛ ɔbɛka ne ho wɔ Ahenni no mu, na mmom “Paradise.” (Luka 23:43) Enti bɔhyɛ yi nte sɛ nea Yesu ka kyerɛɛ n’asomafo no. Wɔn deɛ, Yesu hyɛɛ wɔn bɔ sɛ ɔne wɔn bɛtena nhennwa so wɔ Ahenni no mu. (Mateo 19:28; Luka 22:29, 30) Ɔbɔnefo yi, ɛbɛyɛ sɛ asase so Paradise a Yehowa de maa Adam ne Hawa ne wɔn asefo no, na ɔnim ho asɛm. Afei a ɔrebɛwu yi, na wabɛnya anidaso sɛ ne nsa bɛka asase so Paradise no bi.
Adɛn nti na bobesa a wɔde maa Yesu no, wannom?
Dɛn na wɔkyerɛw bɔɔ Yesu atifi? Nsɛm bɛn na Yudafo no kekaa wɔ ho?
Nea wɔyɛɛ Yesu ntade no, Bible nkɔmhyɛ bɛn na ɛmaa no baa mu?
Abɔnefo mmienu a na wɔka Yesu ho no, ɛbɔ bɛn na ɔhyɛɛ baako?